नायिका तथा ऋषि धमला पत्नी एलिजाको स्विमिङ पुलमा हट बिकिनी अवतार (फोटोफिचर) « Dainiki
३ मंसिर २०७६, मंगलवार १४:५५
३ मंसिर काठमाडाैँ । नायिका तथा चर्चित पत्रकार ऋषि धमला पत्नी एलिजा गौतमले भने आफुलाई स्विमिङ पुलमा बिकिनी अवतारमा प्रस्तुत गरेकी छन् । फिल्म ‘अनुराग’ डेब्यु नायिका एलिजाले उक्त बिकिनी अवतारको फोटोहरुलाई आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुकमा पोस्ट गरेकी छन् ।
पछिल्लो समय नेपाली नायिकाहरु बिकिनी अवतारमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । कुनै पर्वाह नमानी निस्फिक्री रुपमा बिकिनी अवतार प्रस्तुत गर्ने नायिकाहरुलाई खासै सकारात्मक प्रतिक्रिया त आउदैन तर पनि यो कार्य निरन्तर चलिरहेको छ ।
एलिजाले ३ ओटा बिकिनी फोटो पोस्ट गर्दै स्टाटसमा शुभ दिनको शुभकामना दिदै उनले आफुले जिन्दगीलाई बुझ्न नसकेको पनि बताएकी छिन् । बिकिनीमा सुन्दर देखिएकी एलिजाले लेखेकी छन्, ‘साँच्चै जिन्दगी कसले बुझ्यो ?केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ भन्नेले बुझ्यो की !! सबथोक गुमाएर पनि केही नपाउनेले बुझ्यो !!मैले त केही बुझिन ?’
९ असोज, नयाँ दिल्ली । कोरोना संक्रमणबाट भारतका चर्चित गायक एसपी बालासुब्रमण्यमको निधन भएको छ।
पशुपति शर्मा र बालगायिका आयुषा केसीको स्वर रहेकाे गीत ‘आउने कि नआउने दाइ’ सार्वजनिक
२ असाेज, काठमाडाैँ । गायक पशुपति शर्माको स्वरमा रहेको दशैँ तिहार गीत सार्वजनिक भएको छ।
एलिना चौहानकाे गीत ‘पन्छी’ सार्वजनिक
१ असाेज, काठमाडौँ । गायिका एलिना चौहानकाे नयाँ गीत ‘पन्छी’सार्वजनिक भएकाे छ । लोक आधुनिक
गायक राजेश पायल राई र भीमा राईको स्वरमा ‘ओठमा लाली’ सार्वजनिक
१ असाेज, काठमाडाैँ । लोकप्रिय गायक राजेश पायल राई र नव गायिका भीमा राईको सुमधुर